Australia oo dib u furaysa goob qaxootiga lagu hayn jiray oo muran badan dhalisay - BBC News Somali
Australia oo dib u furaysa goob qaxootiga lagu hayn jiray oo muran badan dhalisay
Image caption Christmas Island
Ra'iisulwasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in uu dib u furi doono xaruntii Christmas Island ee dadka lagu hayn jiray, taas oo muran badan horay uga dhashay, arrintan ayaana timid ka dib markii uu baarlamaanka kala kulmay guul darro taariikhi ah.
Talaadadii ayay xildhibaanno aan xukuumadda ka mid ahayn u suuragashay in la meelmariyo in qaxootiga xannuunsan ee ku jira xarumaha ka baxsan dalkaas, in Australia si sahlan loogu dawayn karo.
Morrison ayaa sheegay in sharcigaasi uu wiiqayo siyaadda adag ee xuduudaha dalka, isla markaasna uu dhiiri galinayo dadka tahriibka ka shaqaysta.
Dadka ka soo horjeedda ayaa ku eedeeyay in uu faafinayo cabsi ka hor ka hor doorashada foodda ku soo haysa.
Tan iyo sannadkii 2013kii dawladda Australia ayaa dadka magangalyo doonka ah ee doomaha ku yimaadda u diraysay xarumo ku yaalla Manus Island iyo Nauru.
Markii horana waxay sidoo kale dadka u diri jirtay jasiiradda Christmas Island, halkaas oo ah jasiirad ay Australia leedahay oo ku taalla badwaynta Hindiya, taas oo dhul waynta Australia u jirta 2,600km, dhanka koonfureed ee dalka Indonesia waxay u jirtaa 300km.
Qaramada Midoobay ayaa Australia ku dhaliishay siyaasadaheeda ku aadan goobaha ay dadka ku hayso waxayna ku tilmaantay "kuwo banii'aadminimada ka baxsan",balse dalkaasi ayaa ku adkaysanaya in arrintaasi ay ka hortag u tahay tahriibinta dadka iyo badbaadana ay u tahay dadka badaha ku dhammaada.